China TPE / TPO / PVC flooring ụkwụ Extrusion akara factory na suppliers | JWELL
Tumadi eji maka na-amị ụdị nke PVC Ft akpụkpọ anụ na-apụta. Flokwanyere Ft Ft akpụkpọ anụ nwere arụmọrụ nke mgbochi esemokwu, corrosion eguzogide, skidproof, impermeable na inflaming retarding, na na ọtụtụ-eji na akpaaka, nkwari akụ, ntụrụndụ ebe, ngosi ulo, ụlọ, wdg. Ọdịdị nke a mmepụta akara dị mfe, na-adaba adaba iji na-arụ ọrụ .Dị ka ndị ahịa chọrọ, onwem na dị iche iche mmiri, eji maka na-amị otu oyi akwa, multi-oyi akwa mejupụtara mmepụta na nwekwara ike-onwem na ekweghiekwe unit, eji maka amị n'ime ike mmepụta ma ọ bụ ihe ndị dị na mbara igwe na-enweghị ihe mkpuchi na ihe nkiri PVC mma, wdg.
XPE ingfụfụ oku arụmọrụ uru:
1) Akụkụ preheating na cross-linking agbanweela nke ukwuu iji belata ohere ike ikpo ọkụ mgbe ị na-ezute usoro chọrọ. N'otu oge ahụ, a na-echekwa ike.
2) Mgbasa ọkụ na ọkụ na-emeri ntụpọ nke nkesa ọkụ na-enweghị ezi uche na ọkụ ndị mba ọzọ, ọ dịkwa nso na ọrụ okpomọkụ chọrọ nke XPE na-asụ ụfụfụ. Mee XPE ụfụfụ na usoro dịtụ iche, ụfụfụ zuru oke ma kwụsie ike.
3) Nnukwu mmepụta. N'etiti ọkụ na-ere ụfụfụ ugbu a na-emepụta ugbu a na China, ọkụ ọkụ anyị nwere okpukpu atọ nwere ihe karịrị 200 kg / h. Ọzọkwa, mkpụrụ ndụ XPE ụfụfụ dị oke karịa ọkụ ọkụ abụọ. Igwe oriri gas na nke ọkụ ọkụ abụọ.
4) A na-etinye oghere nyocha na mgbidi ogwe nke ngalaba ụfụfụ. N'otu oge ahụ, a na-edozi usoro ịba ụba na ụzọ ọpụpụ nke ụfụfụ ụfụfụ, a na-agbanwekwa ọnụ nke ọkụ ahụ dịka ọnọdụ mmepụta, ka e wee nweta mmetụta nke ịchekwa ike.
5) Mgbasa mgbasa nwere ike iru oge 35-40.
Ngwaahịa obosara 1500-2000mm 2000-3000mm
Extruder nkọwapụta SJZ65 / 132 － SJZ80 / 156 SJZ65 / 132 － SJZ80 / 156 － SJZ65 / 132
Max mmepụta ikike 500-550kg / h 600-750kg / awa
Main moto ike 37kw / 55kw 37kw / 55kw / 37kw
Nke gara aga: PITA / PLA / CPET akara mmepụta gburugburu ebe obibi
Osote: SPC Gburugburu Ebe Obibi Gburugburu Ebe Obibi
PET / PLA / CPET Environmental Protection Sheet pro ...
N'èzí Ngwa, Vkwanyere Corrugated Board, Pc oghere mpempe akwụkwọ, Pc Mpempe akwụkwọ, Pee Pp Osisi-Plastic Ft Extrusion, Vkwanyere Multi Layer Okpomọkụ mkpuchi Corrugated Board,